I-GTranslate: Iplagi elula yokuGuqulwa kweWordPress usebenzisa iToliki kaGoogle | Martech Zone
I-GTranslate: Iplagi elula yoGuqulelo lweWordPress usebenzisa iToliki kaGoogle
NgoMvulo, Novemba 2, 2020 Lwesine, Matshi 18, 2021 Douglas Karr
Kwixesha elidlulileyo, bendithandabuza ukusebenzisa ifayile ye- ukuguqulelwa komatshini Kwindawo yam. Ndingathanda ukuba nabaguquleli kwihlabathi liphela bancedise ekuguquleleni indawo yam yabaphulaphuli abahlukeneyo, kodwa akukho ndlela ndinokuphinda ndizibuyise ezo ndleko.
Oko kwathethi, ndiyabona ukuba umxholo wam kwindawo yam kwabelwana ngayo kwilizwe liphela kancinci- kwaye abantu abaninzi basebenzisa Isiguquleli sikaGoogle ukufunda umxholo wam ngolwimi lwabo lweenkobe. Oko kundenza ndibenethemba lokuba inguqulelo inokuba yanele ngoku ukuba uGoogle uyaqhubeka nokuphucula ukusebenzisa ukufunda komatshini kunye nobukrelekrele bokuzenzela.
Ngale nto engqondweni, bendifuna ukongeza iplagi ebonelela ngoguqulelo kusetyenziswa uGuqulelo lukaGoogle, kodwa ndifuna into ebanzi ngakumbi kunedrophu eguqulele indawo. Ndifuna iinjinjini zokukhangela ukuba zibone kwaye zikhangele umxholo wam kumazwe aphesheya ezifuna izinto ezimbalwa:
Metadata - xa iinjini zokukhangela zirhubuluza kwindawo yam, ndifuna hreflang i-tag kwintloko yam ukubonelela ngeinjini yokukhangela ngeendlela ezahlukeneyo ze-URL kulwimi ngalunye.
URL -Kwi-WordPress, ndifuna iipermalinks zibandakanye ulwimi lokuguqulela kwindlela.
Ithemba lam, ewe, lelo liyakuyivula indawo yam ifikelele kubaphulaphuli ababanzi kwaye kunembuyekezo entle kutyalo-mali njengoko ndinokonyusa indibaniselwano kunye nentengiso yam ngaphandle kokufuna iinzame zokuguqulela ngesandla.
Iplagi yeWordPress yeWordPress
I-plugin ye-GTranslate kunye nenkonzo ehamba nazo zibandakanya zonke ezi zinto kunye nezinye iindlela:
Dashboard -Idashboard ebanzi yenkonzo yokumisela kunye nokwenza ingxelo.
Umatshini wokuguqulela Uguqulelo oluzenzekelayo lukaGoogle kunye neBing.
Isalathiso seNjini yokukhangela Iinjini zokukhangela ziya kulathisa amaphepha akho aguqulelweyo Abantu baya kuba nakho ukufumana imveliso oyithengisayo ngokukhangela kulwimi lwabo lweenkobe.
Injini yokukhangela ii-URLs eziHlobo -Yiba ne-URL eyahlukileyo okanye isizinda esincinci kulwimi ngalunye. Umzekelo: https://fr.martech.zone/.
Inguqulelo ye-URL -I-URLs yewebhusayithi yakho inokuguqulelwa ebaluleke kakhulu kwi-SEO yeelwimi ezininzi. Uyakwazi ukuguqula ii-URL eziguqulweyo. Ungasebenzisa iqonga leGTranslate ukuchonga i-URL eguqulweyo.
UHlelo lokuGuqulela -Hlela iinguqulelo ngesandla ngesihleli esisemgceni seGTranslate ngqo kumxholo. Oku kuyimfuneko kwezinye izinto… umzekelo, andifuni igama lenkampani yam, Highbridge, iguqulelwe.
Kumgca wokuhlela -Ungasebenzisa is syntax ngaphakathi kwinqaku lakho ukubuyisela amakhonkco okanye imifanekiso esekwe kulwimi.
Is syntax iyafana nomfanekiso:
Kwaye ukuba awufuni icandelo eliguqulelweyo, ungongeza nje udidi lwe ingcaciso.
Amanani okusetyenziswa -Ungayibona itrafikhi yakho yokuguqulela kunye nenani leenguqulelo kwideshibhodi yakho.
Subdomains -Ungakhetha ukuba kwisizinda ngasinye kulwimi lwakho ngalunye. Ndikhethe le ndlela kunendlela ye-URL kuba yayirhafu encinci kwi-webserver yam. Indlela ye-subdomain ikhawuleza ngokumangalisayo kwaye imane ikhomba ngqo kwiphepha eligciniweyo likaGtranslate.
thambeka -Ungaba nesizinda esahlukileyo kulwimi ngalunye. Umzekelo, ukuba kusetyenziswa i-domain kwinqanaba eliphezulu.tld), Indawo yakho inokubeka phezulu kwiziphumo zeinjini yokukhangela eFrance.
Abasebenza kunye -Ukuba ungathanda abantu ukuba bancedise kuguqulelo olwenziweyo, banokufikelela kwi-GTranslate kwaye bongeze ukuhlela ngesandla.
Hlela Imbali Jonga kwaye uhlele imbali yakho yokuhlela okwenziwe ngesandla.
Uhlaziyo olungenamthungo -Akukho sidingo sokujonga uhlaziyo lwesoftware kwaye uzifake. Sizikhathalele ngohlaziyo oluqhubekayo. Uyayonwabela inkonzo esexesheni yonke imihla
iilwimi -IsiBhulu, isiAlbania, isiAmharic, isiArabhu, isiArmenian, isiAzerbaijani, isiBasque, isiBelarusian, isiBengali, isiBosnia, isiBulgaria, isiCatalan, isiCebuano, isiChichewa, isiTshayina (Esenziwe lula), isiTshayina (Esiqhelekileyo), isiCorsican, isiCroatia, isiCzech, isiDanish, isiDatshi, isiNgesi, isiNgesi , IsiEsperanto, isiEstonia, isiPhilippines, isiFinnish, isiFrentshi, isiFrisian, isiGalician, isiGeorgia, isiJamani, isiGrike, isiGujarati, isiHaiti, isiHausa, isiHawaii, isiHebhere, isiHindi, isiHmong, isiHungary, isi-Icelandic, isi-Igbo, isi-Indonesia, isi-Irish, isi-Itali, isiJapan, isiJavanese , IsiKannada, isiKazakh, isiKhmer, isiKorea, isiKurdish, isiKyrgyz, isiLao, isiLatin, isiLatvia, isiLithuania, iLuxembourg, isiMacedonia, isiMalagasy, isiMalayalam, isiMalay, isiMaltese, isiMaori, isiMarathi, isiMongolia, isiMyanmar (isiBurma), isiNepali, isiNorway, isiPashto, IsiPersi, isiPolish, isiPhuthukezi, isiPunjabi, isiRomania, isiRashiya, isiSerbia, isiShona, isiSuthu, iSindhi, iSinhala, iSlovak, iSlovenia, iSamoan, iScots Gaelic, iSomalia, iSpanish, iSundanese, isiSwahili, isiSwedish, isiTajik, isiTamil, isiTamil, isiTelugu, isiThai, isiTurkey. , IsiUkraine, isiUrdu, isiUzbek, isiVietnam, isiWelsh, isiXhosa, isiYiddish, isiYoruba, isiZulu
Bhalisela i-GTranslate yeentsuku ezili-15
I-GTranslate kunye ne-Analytics
Ukuba usebenzisa indlela ye-URL ye-GTranslate, awuyi kungena kuyo nayiphi na imiba ngokulandelela ukugcwala kwetrafikhi. Nangona kunjalo, ukuba usebenza kwimimandla engezantsi, kuyakufuneka uqwalasele ngokufanelekileyo iGoogle Analytics (kunye noMphathi weTek kuGoogle ukuba uyayisebenzisa) ukubamba ukugcwala. Kukho ifayile ye- Inqaku elihle elichaza ukuseta andizukuyiphinda apha.
Ngaphakathi kuGoogle Analytics, ukuba unqwenela ukwahlula ii-analytics ngolwimi, unga yongeza igama lenginginya njengenxalenye yesibini ukucoca itrafikhi yakho kwisizinda esincinci.
Ukubhengezwa: Ndililungu le GTranslate.
tags: bing guqulagu qulela kwiGooglehreflangukuguqulelwa komatshinitranslationWordPressiplagi yamagamaInguqulelo yamagamaIplagi yokuguqulela igama
Ifomula ye-Excel yokuCwangcisa uHlaziyo loLuntu ngoMhla weVeki
I-Instapage: Yonke into eku-In-One PPC kunye neSisombululo sePhepha lokuHamba kwePhulo